चुरे दोहनले बस्तीमा जङ्गली जनावरको आतङ्क, स्थानीय त्रसित – मिथिला दैनिक
मिथिला दैनिक १० माघ २०७६, शुक्रबार १७:५७
जनकपुरधाम, माघ १० गते ।
चुरेक्षेत्रको चरम दोहन तथा वन फँडानीले यहाँ पानीको सङ्कट बढ्दै गएको छ। यससँगै यहाँका बस्तीमा अर्को समस्या थपिएको छ– त्यो हो जङ्गली जनावरको आतङ्क।
वन विनाशका कारण पानीका स्रोत तथा आहारा नपाएपछि गाउँ-गाउँमा पसी जङ्गली जनावरले आतङ्क मच्चाउन थालेका छन्। चुरे क्षेत्र उजाड हुनथालेपछि यहाँका वन्यजन्तु गाउँ पसेर बितन्डा मच्चाउन थालेका हुन्।
धनुषाको उत्तरी भेगस्थित मिथिला नगरपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिकालगायत महोत्तरीका अधिकांश स्थानीय तहमा समेत जङ्गली जनावरले उत्पात मच्चाएपछि स्थानीयको त्रसित छन्।
चुरे दोहन तथा फँडानीले जङ्गली जनावर खेतबारी र गाउँ छिरेपछि खेतीपाती नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। सयौं बिघा जमीनमा लगाइएको बालीनाली जङ्गली जनावरले नष्ट गरिदिएपछि स्थानीयले खेतपाती छोडेर बोटविरुवा रोप्न थालेका छन्।
खेतीपातीले जीविकोपार्जन गर्ने किसान जङ्गली जनावरबाट आजित भएका छन्। जंगलबाट बस्ती छिरेका बाँदरको समूहले दिनभरि घरघरमा उत्पात मच्चाउँदै आएको छ। ‘एकैपटक ५०-६० वटा समूहमा आउँछन्। घरभित्र पसेर सरसमान लान्छन्। कहिलेकाहीँ पकाएको भातै लिएर पनि भाग्छन्। अनि फेरि पकाउनुपर्छ,’ बटेश्वर-१ का राजदेव महतोले भने, ‘घरको सबै खपडा फोडिदिए। वर्षको दुईपटक खपडा बदले पनि वर्षामा पूरै घर चुहिन्छ। दिनभरि बच्चा पनि डराएरै बस्छन्।’ बारीमा लगाएको सबै बाली जङ्गली जनावरले नष्ट गरिदिएको उनले गुनासो गरे।
करिब पाँच वर्षदेखि बटेश्वर गाउँपालिका र मिथिला नगरपालिकामा बाँदरको उत्पातले स्थानीय पीडित छन्। ‘पाँच कठ्ठामा मकै रोपेको थिएँ। बाँदर र घोरगाधाले सबै नष्ट गरिदिए। बारीमा लगाएको तरकारीबाली पनि खाइदिए,’ बटेश्वर-१ का देवेन्द्र महतोले भने, ‘करिब पाँच वर्षअघि एक बिघामा खेतीपाती गर्थे तर, जङ्गली जनावरकै डरले अहिले सबैमा रुखबिरुवा लगाइदिए।’ जङ्गली जनावरले पुर्‍याउँदै आएको क्षतिबारे पटक-पटक मेयर र वडाध्यक्षलाई सुनाउँदा कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयको भनाइ छ।
दिनभरि मिहिनेत र पसिना बगाएर गरिएको खेतीपातीको संरक्षण हुन नसक्दा विदेश जान लागेको स्थानीय शम्भु सिंहले बताए। ‘सिँचाइ छैन। जसोतसो इनारको पानीले खेतीपाती गर्छु। त्यो पनि बाँदर, घोरगाधा, बँदेलले खाइदिन्छ। अनि, यत्रो मिहिनेत गरेको के फाइदा? कसरी चल्छ घर?,’ उनले दुखेसो पोखे।
बँदेल र नीलगाईले बस्तीमै पसेर आक्रण गरिरहेका छन। केहीदिन अघिमात्र बटेश्वर गाउँपालिका-१ मा घरमै बसिरहेकी स्थानीय तेतरीदेवी बँदेलको आक्रमणमा घाइते भएकी थिइन।
गाउँपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर राउतले जङ्गली जनावर धपाउने कुनै उपाय नरहेकाले चुपचाप बस्नु परेको बताए। ‘कुनै उपाय नै छैन, कसरी भगाउने? बिजुलीको तार ओछ्याएर पनि प्रयास गरे तर सफल भइन्,’ उनले भने।
चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन विनाशका कारण पानीका स्रोत सुक्दै गएपछि पानी, सुरक्षित बासस्थान र आहारको खोजीमा जङ्गली जनावर बस्ती पस्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ। तर, यो विषयमा हरेक स्थानीय सरकार विकल्प नै नरहेको भन्दै मौन छन्। चुरे दोहन र जंगल विनाशले पानीका स्रोत सुकेको वनका प्राविधिक बताउँछन्। कटानले खहरे तथा ठूला खोलाको सतह माथि उठ्दै गएको छ।
‘चुरे कटान र जथाभावी उत्खननले खोलामा बालुवा माथि र पानी तल सरिरहेको छ,’ सामुदायिक वन महासंघका अध्यक्ष नन्द सिलवालले भने, ‘जंगलमा पहिला जताततै पानी हुन्थ्यो, अचेल छैन। त्यसैले वन्यजन्तु चुरे र जङ्गल छाडेर गाउँमा पसिरहेको छ।’ जङ्गलबाट बँदेल, नीलगाई, बाँदरलगायत कहीलेकाहीँ हात्ती, चितुवा, र भालु समेत बस्ती पस्ने गरेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार केहीदिन अघिमात्र भालुको आक्रमनबाट एकजना गम्भीर घाइते भएका थिए।
सामुदायिक वन उपभोक्ता वन महासङ्घ नेपाल प्रदेश २ का अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माले चुरेको अवस्था दिनप्रतिदिन दर्दनाक बन्दै गएको बताए। ‘चुरेमा सरकारको ध्यान छैन। संरक्षण गर्ने अभियन्ता असुरक्षित छन्। सरकार, प्रहरी प्रशासन सबै तस्करसँग मिलेका छन्’, उनले भने।
चुरे तराई मधेसको लाइफलाइन भएकाले सिङ्गो तराई बचाउन सरकारले तराई-मधेस राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानलाई सशक्त रूपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। @todaypati
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १५:४८
६ असार २०७७, शनिबार १५:५६